कता हराए सुनिल सेट्टी ? सुनिल सेट्टी बलिउडमा कसरी गुमनाम भए ? - Khabar Nepali
होमपेज / Special and Breaking / कता हराए सुनिल सेट्टी ? सुनिल सेट्टी बलिउडमा कसरी गुमनाम भए ?
कता हराए सुनिल सेट्टी ? सुनिल सेट्टी बलिउडमा कसरी गुमनाम भए ?
बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् सुनिल सेट्टी । कुनै समय एक्सन हिरोको रुपमा परिचीत उनी पछिल्लो समय बलिउडदेखि पर नै रहेका छन् । फिल्ममा कमै देखिएका उनी बिजनेशमा बढी सक्रिय रहेका छन् । ९० को दशकमा सुनिल चर्चाको शिखरमा रहेका थिए । उनले बलवान फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए । जुन बक्स अफिसमा हिट साबित भएको थियो । उनले त्यसपछि धेरै सुपरहिट फिल्महरु गरे । उनले अभिनय गरेका फिल्महरु मोहरा, दिलवाले, बोर्डरजस्ता फिल्महरु निकै चर्चामा रहे । उनले करिब १२० वटा फिल्ममा काम गरेका छन् ।
उनीसँग फिल्मी करिअर बनाउन बलिउडमा हाम फालेका दुई अभिनेता अक्षय र अजय देवगण बलिउडमा जरो गाडेर बसेका छन् । उनीहरुले बक्स अफिसमा एकपछि अर्को हिट फिल्म पस्किरहेका छन् । तर, यो मामिलामा भने सुनिल धेरै पछि छुटिसकेका छन् । सुनिलको आफ्नै गल्तीका कारण आज उनी धेरै पछि परेको स्वीकार गरे ।
उनले भनेका थिए,‘आज म अक्षय र अजयलाई जुन स्थानमा देखिरहेको छु, मलाई उनीहरुप्रति गर्व लाग्छ । उनीहरुलाई म सलुट गर्छु । उनीहरु मेरा नजिकका साथी हुन् । उनीहरुको सफलताले मलाई प्रेरित गर्ने काम गर्छ । म उनीहरुको ईष्या कत्ति पनि गर्दिन । मैले गल्ती गरे र आज यो स्थानमा छु । उनीहरुको तारिफ गरेर म थाक्दिन । कहिलेकाँही लाग्छ उनीहरु जस्तै म भएको भए । उनीहरुजस्तो कडा मेहनत मैले गर्न सकिन ।’
उनले थप्दै भनेका थिए,‘म इमोशनल थिए, मैले कहिल्यैँ पनि आफ्नो करिअरलाई गम्भिरताका साथ लिइन । उतार चढाबबारे सोचिन । म कही कतै पनि सोचेर हिँडदिन । पछिल्लो शुक्रबार फिल्म हिट थियो वा फ्लप मैले सोचिन । म दिमागी रुपमा एकदम बलियो छु । आफैप्रति ठुलो विश्वास राख्ने काम मैले हरदिन गरेको छु ।’